Matambudziko Evanhukadzi—Kusarurwa pasi pose nokuti vanhukadzi
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
“Pandinoona mabatirwo anoitwa vanhukadzi, ndinoti dai zvangu ndikaramba ndiri mudiki.”—Mashoko aya ari mumagazini yechiFrench inonzi GEO akataurwa naZahra, ane makore 15.
MASHOKO ekasikana aka, ari kurudyi, anonyatsoratidza zvinhu chaizvo zviri kuitika, zvokuti munyika yose vasikana nevanhukadzi vanorohwa uye vanosarurwa kwoupenyu hwavo hwose. Chimboongorora zviri pasi apa.
Kusarurwa nokuti vanhukadzi. KuAsia, vabereki vakawanda vanoda vanakomana kupfuura vanasikana. Imwe ongororo yeSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose yakaitwa muna 2011 inoti zvakaonekwa kuti kunyika dzokuAsia vana vechisikana vanoda kusvika mamiriyoni 134 vakaurayiwa vachiri mudumbu, vachangozvarwa, kana kuti nechikonzero chokushaya anochengeta.
Dzidzo. Munyika yose, pavanhu vatatu voga voga vasina kuenda kuchikoro zvachose nevakaenda kuchikoro kwemakore asingasviki mana, vaviri vavo vakadzi nevasikana.
Kushungurudzwa pabonde. Vanhukadzi vanopfuura mabhiriyoni maviri nehafu vanogara munyika dzinonzi kubatwa chibharo nemurume wako haisi mhosva.
Utano. Munyika dzichiri kusimukira, pamaminitsi maviri oga oga, munhukadzi anourayiwa nepamuviri kana kuti pakusununguka nemhaka yokuti panenge pasina zvipatara zvakakodzera.
Kodzero yokuva nezvinhu zvavo. Kunyange zvazvo vakadzi varivo vanorima hafu yezvirimwa zviri munyika, munyika dzakawanda havana kodzero dzepamutemo dzokupiwa nhaka yeminda kana kuti zvinhu zvinonzi ndezvavo.
Sei vakadzi vachinyimwa kodzero idzi dzinofanira kunge dziine munhu wose? Vamwe vanhu vanotevedzera zvitendero netsika zvinokurudzira uye zvinototi hapana chakaipa nokudzvinyirira vanhukadzi kana kuvarova. Rimwe pepanhau rokuFrance rinoti, gweta rokuIndia rinonzi Chandra Rami Chopra rakati: “Mitemo yezvitendero zvose yakafanana pakuti inotsigira kusarurwa kwevanhukadzi.”
Ndiwo maonero aunoitawo here? Unofunga kuti Bhaibheri rinozvidza vanhukadzi sezvinoitwa nemamwe mabhuku ezvitendero here? Vamwe vanofunga kuti dzimwe ndima dzeBhaibheri dzinotsigira pfungwa iyoyo. Asi Mwari anotaurwa muBhaibheri anoona sei vanhukadzi? Kunyange zvazvo iyi iri nyaya ingagumbura vamwe, kunyatsoongorora zvinotaura Bhaibheri kuchatibatsira kuwana mhinduro yacho.